दुधमा बेसार मिसाएर खानुका अचुक फाइदा थाहापाई राख्नुहोस ! - ज्ञानविज्ञान
दुधमा बेसार मिसाएर खानुका अचुक फाइदा थाहापाई राख्नुहोस !
घरेलु उपचार, भान्छामा औषधी
आयुर्वेदमा बेसारलाई सबैभन्दा राम्रो प्राकृतिक एन्टिबायोटिक भनेर व्याख्या गरिएको छ। यसैले छाला, पेट तथा अन्य रोगका लागि यसलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ। त्यस्तै दुधमा पनि प्राकृतिक एन्टिबायोटिक रहेको हुन्छ । यसले शरीरमा हुने प्राकृतिक संक्रमणलाई रोकथाम गर्दछ। यदि बेसार र दुधलाई मिसाएर सेवन गर्ने हो भने हाम्रो शरीरलाई यस्ता फाइदा हुन्छन् ।
Topics #दुध #दुधमा बेसार #दुधमा बेसार मिसाएर खानुका फाइदा #बेसार
Don't Miss it फर्सीको मुन्टा र गटा खानुका आश्चर्यजनक फाइदाहरू जान्नुहाेस्
Up Next लसुनमा मह मिलाएर खानुको चामत्कारिक फाइदा जानिराखाै
हाम्राे घरमा रहेको अदुवा जीवनबुटी हो, यसको सेवनले क्यान्सर, अम्लीय, सुगर चैट
तरकारीको रुपमा खाने भान्टाले यस्ता रोगहरुलाई जरैबाट निको पार्दछ – जान्नुहोस् यसका फाइदाबारे
के तपाईलाई भान्टाको तरकारी मन पर्छ ? यदि मन पदैँन भने पनि खानुहोस् । किनकी भान्टा मानव स्वास्थ्यका लागि निकै…
बेसारको औषधीय गुणलाई बुझेर नै सौन्दर्य प्रसाधनमा र औषधिको रूपमा पनि यसको प्रयोग प्रशस्त मात्रामा भएको पाइन्छ । बेसारलाई हलेदो…
लामखुट्टेले सतायो? यसरी भगाउनुहोस्
गर्मीमा लामखुट्टेले निकै सताउँछ। लामखुट्टको टोकाइले मलेरिया, इन्सेफलाइटिस, डेंगु जस्ता रोग लाग्न सक्छ। चिकित्सकहरुका अनुसार लामखुट्टेको देख्ने क्षमता राति झन्…
के हुन्छ महिनावारीकाे बेला याैन सम्पर्क गर्दा ?
यो व्यक्तिगत इच्छामा पनि भर पर्ने कुरा हो । कसैलाई महिनावारी भएको बेला सम्भोग गर्ने मन हुन्छ भने कसैलाई हुँदैन…
कुपोषण त छैन, तपाईंको बालबालिकामा ?
शारीरिक र मानसिक विकासका लागि शिशुदेखि वयस्क हुँदासम्मको विकासका लागि, रोगमुक्त रहनका लागि सही अनुपातमा उचित भोजनको आवश्यकता हुन्छ । सन्तुलित…
रमाइला व्यायाम गर्दै मुटु स्वस्थ राख्नुहोस
१. बक्सिङ्ग : केवल ३० मिनेटको बक्सिङ्ग अभ्यासले करीव ४०० क्यालोरी शक्ति जलाउन मद्दत गर्छ । त्यसैले आजैबाट बक्सिङ्ग खेलमा…
मेवा एक स्वादिष्ट तथा पोषणले भरिपूर्ण फल हो भन्ने कुरामा कसैको पनि दुई मत हुनसक्तैन । तर मेवा भित्र हुने…
यस्ता छन्, तातो पानीले नुहाउँदाका बेफाइदा
१. तातो पानीले हात र गोडाका नङमा खराब असर पार्छ । नङ भाँचिने, संक्रमण हुने र नङवरिपरिको छाला फाट्ने समस्या…
यस्ता छन्, दाँत सेतो र चम्कीलो बनाउने केहि घरेलु उपाए
घिउकुमारी र ग्लिसरिन घिउकुमारीले स्वास्थ्य र सौन्दर्य बढाउँछ । घिउकुमारी दाँतलाई सेतो पार्ने गजबको प्राकृतिक औषधि पनि हो । यसको…
आल्मुनियमफ़ोइल मा खाना प्याक गर्नु सहि या गलत ?
घर संसार (2)